Mabhuku aJuan Gómez-Jurado, akasiyana uye zvinyorwa kugona | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku
Mabhuku aJuan Gómez-Jurado.
Mabhuku aJuan Gómez akaburitswa munyika dzinopfuura makumi mana. Sekureva kweAmazon, zvinyorwa zvake Chiratidzo cheMutengesi y Scar vakave iwo anotengesa zvakanyanya zvinyorwa zvemagetsi panguva ya2011 na2016, zvichiteerana. Zvakare, munyori wechiSpanish aive mumwe wevanyori vekutanga kuburitsa mumhando yemagetsi mumutauro wechiSpanish, (Tsori yaMwari, 2006).
Mabhuku ake anoshanda akareba marudzi akasiyana siyana. Kubva kunonakidza kwevakuru vanonakidza -Mhumhi nhema (2019) -, kuburikidza nevechidiki mukurumbira uye nhevedzano yevana, kunyange nyaya dzisiri dzechokwadi. Kunyanya, sagas ye alex mwana y Rexcatators vakasimudzira mamirioni evaravi vevana nevechiri kuyaruka kutenderera pasirese. Naizvozvo, zviri pachena kuti kuchine zvikamu zvichabuda mune ese akateedzana.
1 Nezve Juan Gómez-Jurado
1.1 Kuzvarwa, zvidzidzo uye mabasa
2 Mabhuku aJuan Gómez
2.1 Nhoroondo dzake dzevakuru
2.1.1 Tsori yaMwari (2006)
2.1.2 Mutengesi Chiratidzo (2008)
2.1.3 Murwere (2014)
2.1.5 White Mambokadzi (2018)
2.2 Alex Colt Mutsara
2.4 Vakazvimirira Vana Mabhuku Mabhuku
2.5 Bhuku rake risiri rekunyepedzera
Nezve Juan Gómez-Jurado
Kuzvarwa, zvidzidzo uye mabasa
Akazvarwa muMadrid muna Zvita 16, 1977. Akawana Bachelor yake yeRuzivo Sayenzi kuECU San Pablo University. Mubasa rake rezvenhau akashanda kune vezvenhau vakaita se redhiyo España, mugero +, ABC y El Mundo, pakati pevamwe. Pamusoro pezvo, ave achipa magazini Chii chekuverenga, Nyora pasi y NY Times Bhuku Rekuongorora.
Gómez-Jurado akabatanidzwawo mumapodcast (Wemasimbaose y Heano maDragoni) uye pane chiteshi "Seriotes de AXN" (YouTube). Akanga ari mumwe wevaporofita vanotaura chiSpanish vanyori mune zvemagetsi mafomati sechikamu che "1libro 1euro", chirongwa chakabatana chevanyori. Chiratidzo cheMutengesi (2008), bhuku rake rechitatu, rakamuwanira iye VII Guta reTorrevieja International Novel Prize.
Mabhuku aJuan Gómez
Nhoroondo dzake dzevakuru
Parizvino, munyori weMadrid akagadzira mazita mapfumbamwe anoitirwa vanhu vakuru. Mune ese Juan Juan Gómez-Jurado anosvika pamatanho ekufungidzira anokwanisa kuita kuti vaverengi vake vabate mweya wavo kubva pekutanga kusvika kune rekupedzisira peji. Uye haazeze nyaya dzeminzwa kana dzekupokana dzemweya; Anovaudza zvese pasina kuvanda kana kufungira zvisizvo. Nekuda kwekubata kwake kwakanaka kwenyaya iyi, mabasa ake evakuru anogara achioneka.
Aya maitiro ane mukurumbira mumabhuku akadai se Chibvumirano namwari (2007), Ngano yembavha (2012) uye Chakavanzika Chakavanzika chaVaWhite (2015). Saizvozvo, mamwe midhiya -ABC o Iyo Tsika, semuenzaniso- ivo vanotsanangura Gómez-Jurado se "tenzi weanonakidza." Rondedzero yemanoveli ake evakuru anoipedza
Tsori yaMwari (2006)
Mamwe makomendi akaburitswa nevaverengi pane ezvinyorwa zvemasamba ezviratidzo Tsori yaMwari kunge chinyorwa chine nharo. Gómez-Jurado anotsanangura zvisingaenzaniswi maprotocol akasiyana uye maitiro ekuchengetedza mukati meVictoria pakati peyakaomesesa mamiriro. Zvino, muverengi akanyudzwa mumibvunzo ine chekuita nekupondwa kwemakadhinari maviri panguva yeConclave yekusarudza Pope mutsva.
Kuti ujekese chokwadi ichi, chiremba wezvepfungwa, Paola Dicanti anobatana naFather Anthony Fowler. Pakati pechirongwa, huvepo hwemhondi inoteedzerwa iyo inotarisirwa nevatungamiriri vechechi inoratidzwa. Kuoma kwekuferefeta kwakanyanya, nekuti padanho repamutemo kufa kwemakadhinari hakuitika.
Chiratidzo cheMutengesi (2008)
Iyo rondedzero inotanga muna 1940, apo boka revaya vanodzungaira maGerman vanoponeswa nechikepe chevatengesi. Mukutenda, kaputeni wechikepe anotambira chipo chegoridhe nematombo anokosha. Chipo chiri kutaurwa chiratidziro chakabatana nezvakaitika kuna Paul, nherera yechidiki yeMunich. Anoshuvira pese paanogona kuburitsa chokwadi pamusoro penyaya dzinopesana dzakatenderedza kufa kwababa vake.
Kuedza kwezuva nezuva kwekurarama, kunowedzerwa rudo rusina mugumo kumusikana wechiJuda, kushungurudzwa kwemukoma uye kupinda kwake muFreemasonry. Nezvinhu zvese izvi, Gómez-Jurado anotora muverengi adzokere kumakore ekukura kwesimba revaNazi, pasati pabatanidzwa weTatu Reich.
Iyo inoverengeka ine yakanyanya kukwirisa dosi yekushushikana iyo inoita kuti muverengi afungire mukati memaawa makumi matatu nemasere ekukudziridzwa kwayo. Kwete pasina yaive pakati pemabhuku akaverengwa zvakanyanya a2014. Iye protagonist, anozivikanwa neurosurgeon David Evans, anotarisana nedambudziko risingakundike mutsika munhangemutange nenguva. Maitiro ekufunga pakati penzvimbo dzinoyera kwazvo (mhuri) uye chiito chinogona kuchinja nhoroondo zvachose?
Kune rimwe divi, chiremba akaiswa nhema ne psychopath uyo akabira mwanasikana wake mudiki Julia. Iko kutyisidzira: anofanirwa kurega murwere ari kushanda achifa, zvikasadaro Julia anofa. Kune rimwe divi, kuzivikanwa kwemurwere kunowanikwa ... hapana chimwe uye hapana chakaderera kupfuura mutungamiri weUnited States.
Simon Sax anounza mufananidzo wejaya rakangwara uye rine rombo rakanaka - sezviri pachena - pasina zvikanganiso muhupenyu. Uye zvakare, iye ane mukana wekuva mamioneya nekuda kwekutengeswa kuri padyo kweanoshamisa algorithm (yakagadzirwa naiye) kune nyika zhinji. Nekudaro, protagonist anoviga chakakura chiripo chinowanikwa nekuda kwehunyanzvi hwehukama hwemagariro, kunyanya nevakadzi.
Pakati pekuora mwoyo kwake, Simon anofunga kutendeukira kunzvimbo dzekufambidzana pamhepo kuti awane mumwe wake. Ipapo, anodonha zvakadzama murudo naIrina, kunyangwe ari "hukama husina kujairika" zviuru zvemakiromita kure. Asi anovanza chakavanzika chinovhiringidza, icho chinogona kuve chine hukama neronda risinganzwisisike padama rake.
White Mambokadzi (2018)
Unyanzvi hunonakidza hwakavakirwa pavanhu Antonia Scott naJon Gutiérrez, vese vagari vemunharaunda yeMalasaña yeMadrid. Iye akatsunga kwazvo uye akashinga kugadzirisa matambudziko evamwe vanhu, achirwa nguva dzese nemadhimoni ake emukati. Ane hunhu hwakafanana, akafanorongedzerwa kubatsira, kunyangwe asina kugona kubudirira iye mumwe wake.
Chinyorwa chakarongedzwa muzvitsauko zvipfupi, zvizere nekusaziva uye kushamisa kunoshamisa. Naizvozvo, iko kuverenga kwakasimba uye kwakasimba, kwakakodzera kuenderera. Muchokwadi, iyo sequel yakaburitswa mukati me2019: Mhumhi nhema. Iyo posvo inoongorora kwakadzika kweAntonia's psyche… Chero mhedziso? Hongu, nechinhu chake chimwe chete ndechechokwadi, chete kutya kwake kwechokwadi kuri kwake.
mudungwe alex mwana
Iyo saga ine mwana-wechidiki theme ine protagonist ndiAlex Colt, anonakidza, anononoka uye akashinga mukomana. Munhu mudiki anotakurwa kuburikidza nesiraidhi kuenda kune imwe nzvimbo munzvimbo yekunze. Ikoko, iye anodzidza kuti iye akasarudzwa semudziviriri uye muponesi wezvose zvakasikwa. Nechikonzero ichi, Alex anoumba timu ine boka revasina kusununguka vatorwa vanoongorora gwara rese.
Sezvo mabhuku ari kufambira mberi, mujaho unotyisa une shungu yekuparadza Pasi, maZarkian, anoratidzwa. Zvinhu zvambotaurwa zvinosanganiswa naJuan Gómez-Jurado murwendo rwunozara nemitambo inonakidza, inorondedzerwa nenzira inonakidza uye inonakidza. Iwo akateedzana anoumbwa nemazita mana, rimwe nerimwe rakaratidzirwa zvinehunyanzvi naFran Ferriz. Ivo vanotaurwa pano pazasi:
Alex Colt. Space kadhi (2016).
Alex Colt. Hondo yeGanymede (2017).
Alex Colt. Chakavanzika cheZark (2018).
Alex Colt. Nyaya yakasviba (2019).
Iyo ndeimwe yemasaga ane mwana-wechidiki theme naJuan Gómez-Jurado. Vakagadzirwa vachidyidzana nemwana wepfungwa Bárbara Montes uye vanoratidzira mifananidzo naFran Ferriz. Izvo zvakagadzirwa nechinangwa chekukurudzira tsika dzekuverenga muvana nevechiri kuyaruka, pamwe nekusimudzira kuda nharaunda.
Misoro yakadai sehunhu hwakanaka, kushamwaridzana kana kuvimbika inosvikirwa nepfungwa yakanaka yekuseka iyo inoonekwa seyakasikwa. Ehezve, hapana kushomeka kwezviitiko uye kukonzeresa zvakavanzika zvine simba kwazvo sunga. Parizvino, mana mazita mune akateedzana akaburitswa:
Sango rakasviba (2019).
Vakazvimirira Vana Mabhuku Mabhuku
Juan Gómez-Jurado akanyora mabhuku maviri eprozi akanangana nevateereri vevana-vechidiki: Mamwe manzwi (semunyori wemubatanidzwa; 1996) uye Muchinda wechinomwe (2016). Iyo yekupedzisira inyaya inonakidza yekutaura, inonakidza kwazvo nekuda kwemadimikira anoshandiswa nenzira yakakodzera kuti awedzere kudzika. Iye protagonist mudiki Bhenjamini, anonyanya kunzwisisika kuvanakomana vemadzimambo ehumambo huri kure kwazvo.
Kana shato inotyisa ikaonekwa - inofungidzirwa - inofanirwa kudzingwa nehama dzayo, varwi vane hushingi muumambo. Haingambove iri basa kune akaomesesa Benjamin, asi ... Iyo nyaya inosiya chidzidzo chinoshamisa nezve kuwanda kwehungwaru pamusoro pesimba uye kuremekedza kune avo vanoonekwa sevakasiyana. Uye zvakare, iyo yakanakisa mifananidzo yaJosé Ángel Ares inopedzisa rinonakidza basa.
Bhuku rake risiri rekunyepedzera
IVirginia Tech Massacre: Anatomy yeMunhu Akatambudzwa (2007) nderimwe remabasa ekuratidzira ehunhu hwaJuan Gómez-Jurado. Iyo nhoroondo inotaurwa nemutauro wakatsetseka, hune hunyoro uye padanho reruzivo zvinogona kuvhiringidza vaverengi vasingafungire. Saizvozvowo, mamiriro ekunyongana akakora kwazvo nekuda kweanonakidza-maitiro ekurondedzera uye maficha chaiwo chaiwo enjodzi.
Chinhu chakanakisa chemunyori ndiko kuvaka kwepfungwa dzepfungwa dzaCho Seung-hui, uyo akauraya vanhu akaurayiwa nechando chisina kujairika. Mudzidzi weKorea akaberekerwa kukoreji akapedzisira auraya makumi matatu nevaviri vaaidzidza navo kubva kukambasi kwake asati azviuraya Kunyangwe mazhinji emifananidzo yakavimbika yechiitiko ichi chingaite kunge eschatological, hapana nguva panogona kuve nekurwara kana kusaremekedza kune iye ari rapporteur.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku aJuan Gómez-Jurado
CARMEN CECILIA ALBARRACIN HERNANDEZ akadaro
Ndinoona ichifadza, iyo mhando inoshandiswa naJuan Gómez Jurado
Pindura kuna CARMEN CECILIA ALBARRACIN HERNANDEZ
Aurora rosello akadaro
Ini ndinofunga iye munyori mukuru wemanozha enoveli ... mune isingasviki gore ndakaverenga ese ake enganonyorwa ...
Pindura kuna Aurora Rosello
Vanyori veIreland kupemberera Saint Patrick. Mitsara yakasarudzwa
Kubvunzana naPere Cervantes, munyori weEl chico de las bobinas